Ny fampiasana eReaders dia nitombo 140% tato anatin'ny herinandro vitsivitsy | Vaovao momba ny gadget
Avy amin'ny Actualidad Gadget, dia namoaka lahatsoratra maromaro izahay hanehoana ireo safidy fialamboly samihafa izay anananay nandritra ireo andro niainanay sy ireo izay mbola nitazomana anay. Ho fanampin'ny fitomboana be amin'ny serivisy horonantsary mivantana, ny sehatry ny boky sy audiobook koa niaina fitomboana lehibe.
Araka ny nolazain'i Kobo avy amin'ny Fnac, teo anelanelan'ny 6 sy 19 martsa, nitombo 140% ny fanjifana eReaders raha ny an'ny audibooks dia nanao izany tamin'ny 254%, tarehimarika izay mampiseho ny fahalianan'ny Espaniola amin'ny famakiana nomerika, fomba vaovao handaniana atiny izay nijanona taona vitsivitsy lasa izay.
Nikatona nandritra ny herinandro maromaro ny fivarotam-boky sy ny tranomboky, lasa mahafinaritra ny famakiana nomerika mpamonjy aina ho an'ny sehatry ny haisoratra ary tsy hoe mamela ny mpamaky hampiala voly fotsiny, fa mamela azy ireo hianatra sy hankafy tantara koa. Kobo nataon'i Fnac dia manolotra a boky e-maimaim-poana marobe hahafahana mahazo tombony betsaka amin'ny eReader anay, ary aiza no ahitantsika boky isan-karazany, manomboka amin'ny tantara an-tsary ka hatramin'ny tantara fohy hatramin'ny alàlan'ny fampianarana isan-karazany.
Raha te hiditra ao amin'ity katalaogim-be ity dia mila fotsiny manokatra kaonty amin'ny Rakuten Kobo, ny tranonkala e-book natolotry ny goavambe japoney Rakuten sy ilay mpanamboatra eReaders Kobo.
Ankoatry ny fananana e-boky maimaim-poana marobe dia manana ihany koa izahay anaram-boninahitra isan-karazany latsaky ny 2,99 euro, ankoatry ny audiobooks. Raha mbola tsy nifaly ianao nandritra ireo andro nitazomana ireo dia izao angamba no fotoana hanaovana izany. Hankafy ireo boky rehetra ireo, tsy mila manana eReader, satria azonao atao mivantana amin'ny solosainao, takelaka sy finday avo lenta tantanan'ny iOS na Android izany.
Kobo Books - eBooks sy Audiobooks
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Ny fampiasana eReaders dia nitombo 140% tato anatin'ny herinandro vitsivitsy
Azo ampiasaina amin'ny Windows sy macOS izao ny Facebook Messenger